Safari တွင်သီးသန့် browsing mode ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နှင့်သမိုင်းကိုရှင်းလင်းပါ
Private Safari ၏ mode သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ browsing history တွင်သဲလွန်စမချန်ဘဲသွားလာရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ယခင် browsing mode ကိုအသုံးပြုရန်သတိမရခဲ့လျှင်အချိန်ကိုက်သို့မဟုတ်လုံးဝဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ရှိ Netflix ကို အသုံးပြု၍ ဒေတာလျော့နည်းသုံးစွဲလိုပါသလား။ အောက်ပါ setting များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြproblemsနာမရှိဘဲသင်လုပ်နိုင်သည်ကိုပြသသည်
iOS 11 တွင် AirPods ထိန်းချုပ်မှုများကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း
နားကြပ်တစ်ခုစီကို နှိပ်၍ ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့် AirPods ၏ထိန်းချုပ်မှုများကို iOS 11 ဖြင့်မည်သို့ configure လုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြသည်။
iOS ကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကန့်သတ်သည့်စနစ်တစ်ခုကိုပေးထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကဝဘ်စာမျက်နှာများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားရုံသာမကကလေးငယ်များအတွက်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ tutorial နှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
iCloud တွင်မက်ဆေ့ခ်ျများကို iPhone မှမည်သို့လွယ်ကူစွာဖွင့်ရမည်၊ သင်၏စာတိုများကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်စေရန်သင်ကြားပေးသွားမည်။
သင့် iPhone အသစ်လားဆိုတာသိချင်ပါသလား။ ရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့်သင်၏မော်ဒယ်၏ settings menu ကို ဖြတ်၍ ၎င်းသည် iPhone အသစ်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသည့် iPhone၊ အစားထိုး iPhone သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် iPhone ဟုတ်မဟုတ်ကိုသင်သိရှိနိုင်လိမ့်မည်။
သင်၏ iPhone မှခရက်ဒစ်ကဒ်များကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားပစ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုနှင့်အကြွေးကဒ်အချက်အလက်များကို iOS တွင်သိမ်းဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ န်ဆောင်မှုရှိသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်ကိုသင်ပေးသွားမည်။
iOS မှပေးထားသောသုံးစွဲနိုင်မှုရွေးချယ်စရာများအတွင်းသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုအလိုအလျောက်ဖြေကြားရန် iPhone ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုချက်တစ်ခုကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။
iOS ထုတ်ကုန်အားလုံးမှာအလိုအလျောက် download ချခြင်းကိုဘယ်လိုရပ်ရမလဲ
အလိုအလျောက် downloads ကို disable လုပ်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် iPhone တွင် ၀ ယ်သော application များအားတားဆီးနိုင်သည်။ iPad မှလည်းအပြန်အလှန် download နိုင်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ iPhone ၏ကင်မရာ၏ geolocation ကိုပိတ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့ယူထားသောဓာတ်ပုံအားလုံးသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို GPS ၏တည်နေရာအချက်အလက်များအားမည်သည့်အချိန်တွင်သိမ်းဆည်းမည်မဟုတ်ပါ။
ပိုမိုလွယ်ကူစွာအလုပ်လုပ်ရန်သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad အရွယ်အစားကိုမည်သို့ချိန်ညှိရမည်နည်း
iPhone or iPad အရွယ်အစားကိုညှိဖို့လိုပါသလား။ ဒီနေရာမှာအဆင်ပြေလွယ်ကူသော setting ကိုရရှိရန်ဖြတ်လမ်းကိုမည်သို့ဖန်တီးမည်ကိုဤတွင်ရှင်းပြသည်
iPhone ကအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ သင့် iPhone ဖြင့်မကြာသေးမီကလည်ပတ်ခဲ့သောနေရာများ၏မှတ်တမ်းကိုသင်ရယူနိုင်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ မင်းကိုရှင်းပြတယ်
အများကြီးပိုမြန်သွားလာရန် Safari ကလှည့်ကွက်
သင် Safari ကိုအသုံးချပြီးပိုမိုမြန်ဆန်စွာ browse လုပ်နိုင်ရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်အချို့ပေးပါမည်
သင်၏စကားဝှက်များအားလုံးကိုသင်၏ iPhone (သို့) အိုင်ပက်ဒ်များမှလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့ကြည့်ရှုစီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုသင်ပေးပါမည်။
iPhone ကိုသိမ်းဆည်းထားသော Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း
iPhone ကိုသိုလှောင်ထားသော Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ခြင်းအားကာကွယ်ရန်မည်သို့သင်ရမည်ကိုသင်ပေးပါမည်။ သို့မှသာသင့်အားလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုသင်ဆန္ဒအလျောက်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။
iPhone X တွင်အက်ပ်များကိုပိတ်ရန်
iPhone X သည် multitasking နှင့် close applications များအတွက်အမူအယာအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်၎င်းအားမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်မည်သို့အသုံးပြုသင့်သည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
မင်းရဲ့ iPhone နှေးနေလား။ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်
သင့်ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲစရာမလိုအောင်သင်၏ iPhone ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေရန်အမြန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းအချို့သင်ပေးပါမည်။
သင်၏ Apple ID သို့ပေးအပ်သည့်ကိရိယာအားလုံးကိုမည်သို့စီမံရမည်
သင့် Apple အက်ပလီကေးရှင်းကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မလဲဆိုတာကိုဒီပြသနာကိုတတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်အနည်းငယ်နဲ့သူ့ကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့ကိရိယာများကိုပြပါမယ်။
iPhone မှဓာတ်ပုံများကို external hard drive သို့တင်လိုပါသလား။ သင့်မှာ Apple ကွန်ပျူတာရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးရှင်းပြပါမယ်
မေးလ်ကိုအသုံးပြုပြီး iPhone သို့မဟုတ် iPad မှစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဘယ်လိုလက်မှတ်ထိုးမလဲ
iOS application မှ "mail" မှ PDF document တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိပါက iPhone သို့မဟုတ် iPad မှလက်မှတ်ထိုးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒီနေရာတွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင့်အားရှင်းပြပါမည်
iPhone X နှင့်အတူဖန်သားပြင်များကိုမည်သို့ယူရမည်နည်း
ဒီရိုးရှင်းသော်လည်းအရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ရိုးရှင်းသောအဆင့်ဆင့်လက်စွဲစာအုပ်ကို iPhone X တွင်ဖန်သားပြင်များရိုက်ရန်သင်ခန်းစာ။ ဖန်သားပြင်တွေကိုဘယ်လိုတည်းဖြတ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုဝေမျှရမယ်၊ iPhone X တွင်မည်သို့ရိုက်ကူးရမည်ကိုသင်မသိပါကဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြမည်နည်း။
Wi-Fi စကားဝှက်ကို iOS 11 တွင်ချက်ချင်းမျှဝေပါ
Apple က iOS 11 မှာသူငယ်ချင်းတွေကိုအလိုအလျောက်ဝေမျှခွင့်ပြုမယ့်စနစ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ခဲ့တယ်။ ဒါကဒါပဲ။
iTunes (သို့) Apple Music ကတ်များကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုရွေးရမလဲ
ယခုကျွန်ုပ်တို့အရေးကြီးသည့်အရာအားသင်၏ Apple Music (သို့) iTunes ကဒ်များကိုအလွယ်တကူရယူနိုင်ရန်သင်အလွယ်တကူရွေးနိုင်ပုံကိုအာရုံစိုက်တော့မည်။
iPhone X နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုမည်သို့ ၀ ယ်ယူရမည်ကိုရှာဖွေပါ။ iPhone X အသစ်တွင်အိမ်ခလုတ်မရှိခြင်းကြောင့်အပလီကေးရှင်းများသည်ယခင်ကဲ့သို့မကူးယူနိုင်တော့ပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
သင့် iPhone ၏ဘက်ထရီအခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်နည်းလမ်း ၃ ခု
iPhone ဘက်ထရီရဲ့အခြေအနေကိုသိချင်ပါသလား။ အိမ်မှသင့်ကိုသင်စစ်ဆေးရန်နည်းလမ်းသုံးခုကိုသင့်အားပေးသည်
သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ရှိဂဏန်း ၄ လုံးပါသောသော့ဖွင့်ခြင်း PIN ကိုမည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း
မင်းရဲ့ဂဏန်း ၆ လုံးရှိတဲ့ iPhone က PIN ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသလား။ ဂဏန်း ၄ လုံးသော့ဖွင့် PIN ကိုပြန်သွားချင်ပါသလား။ ဒီမှာငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါတို့ပြောတယ်
သင်သည်ရူးသွပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ပြီး၎င်းတို့ကိုမေ့သွားသောသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ iOS 11 တွင်သင်အသုံးမပြုသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအလိုအလျောက်ဖယ်ထုတ်ရန်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ပါ
iOS 11 ထဲမှာမှန်ဘီလူး mode ကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲ၊
အကယ်၍ သင်ဟာဝါရင့် iOS အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်၎င်းသည်၎င်းကိုရောက်ရှိပြီးကတည်းကဒီ function ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။
iOS 11 အတွက်ဤရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာဖြင့်အလိုအလျောက်အက်ပလီကေးရှင်းဖယ်ရှားခြင်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုလေ့လာကြပါမည်။
အချက်အလက်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ iOS 11.2 မှ 11.1.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ဒါကြောင့် iOS 11.2 မှ 11.1.2 ကို data ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲဘယ်လို download လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်ပြပါမယ်။
iOS 10.x အတွက် Jailbreak နှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သော Houdini
Jailbreak ပြန်လာပါပြီ။ Houdini ကိုသင်တင်ပြပါပြီ။ ဤ iOS version အတွက်သင်တွေ့ရမည့် Jailbreak နှင့်အနီးစပ်ဆုံးအချက်ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏ AirPod များသည် ၉၉% ကောက်ခံခြင်းမပြုပါ။ ဒါကဖြေရှင်းပုံဖြစ်ပါတယ်
အသုံးပြုသူအချို့က AirPods box ရှိဘက်ထရီသည် ၉၉% ထက်မကျော်လွန်ကြောင်း၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဤပြsmallနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုပြသပါမည်။
iPhone ကိုနောက်ခံဂီတဖွင့်စက်အဖြစ် YouTube ကိုအသုံးပြုနည်း
ဗွီဒီယိုများကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်မဖွင့်လျှင်ပင်နားထောင်ရန် YouTube ကိုနောက်ခံ၌မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်ပေးပါမည်။
iPhone X နှင့် iPhone 8 Plus သတိပေးချက်များကိုမြန်မြန်လုပ်ပါ
iPhone X သတိပေးချက်များကိုအမြန်ရယူလိုပါသလား။ ဒီနေရာမှာတစ်ခုကထိတွေ့မှုတစ်ခုရဖို့သင်ခန်းစာတစ်ခုထားခဲ့တယ်
သီးသန့် iPhone X နောက်ခံပုံများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
အသစ်ထွက်လာတဲ့ iPhone အသစ်တိုင်းဟာများသောအားဖြင့်နောက်ခံအသစ်များ၊ ကာတွန်းကားများနဲ့တွဲဖက်လာလေ့ရှိပါတယ်။
အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးစေဘဲ WhatsApp ဖြင့်ဓာတ်ပုံများပို့နည်း
ဒီရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်နဲ့အတူမင်းရဲ့အရည်အသွေးကိုမပျောက်စေဘဲ WhatsApp ကဓာတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုပို့နိုင်မလဲဆိုတာကိုသင်ပြပါမယ်။
iPhone X ၏ Animojis ကို GIF ပုံစံသို့မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုသင့်အားသင်ကြားပေးပါသည်
Workflow မှတစ်ဆင့် Animojis ကို iPhone X ကို GIF အမျိုးအစားသို့အသွင်ပြောင်း။ ပြproblemsနာမရှိဘဲကမ္ဘာအနှံ့သို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်။
iGBA 2.0 emulator အသစ်ကိုသင်၏ iPhone တွင် jailbreak မပါပဲထည့်သွင်းနည်း
သင်၏စက်ပေါ်တွင် Legend of Zelda, Mario Kart သို့မဟုတ် Final Fantasy စသည့်ဂန္ထဝင်များကိုဆော့ချင်ပါသလား။ jailbreak မပါပဲ iGBA 2.0 emulator ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်
သင်၏အသံကိုအသုံးပြုမည့်အစားစာရိုက်ခြင်းအားဖြင့် Siri ကိုသုံးရန်သင်ကြားပေးပါသည်
အသံဖြင့်မဟုတ်ဘဲကီးဘုတ်မှတစ်ဆင့် Siri ကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူပါ။ ၎င်းသည်အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်မပြောနိုင်သည့်အချိန်တွင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးဘက်ခလုတ်ကိုထိစရာမလိုဘဲ iPhone X မျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည်သင်၏ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်ကိုသင်ပေးသည်
iPhone X သည်အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး Apple ၏ပထမဆုံးအကျော်ကြားဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကတည်းက ...
iOS 11 သည်စာသားများကိုအင်္ဂလိပ်မှအခြားဘာသာစကားများသို့ကူးပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့် Siri ဘာသာပြန်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များပါ ၀ င်သည်။ အနာဂတ်၌ဘာသာစကားများပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်။
iPhone, iOS 11 ဗားရှင်းနှင့် Live Photos အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့်ရှည်လျားသောထိတွေ့မှုဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ရရှိနိုင်မည့်အကြောင်းသင်ခန်းစာ
iOS 11 ဖြင့်သင်၏စက်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုအများစုကိုအသုံးပြုပါ
iOS 11 သည်သိုလှောင်မှုမန်နေဂျာကိုယူဆောင်လာသည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာပေါ်ရှိနေရာမည်သို့အသေးစိတ်ကျသည်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
iOS 11 ၏ 'ယာဉ်မောင်းနေစဉ်နှောင့်နှေးခြင်း' အင်္ဂါရပ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း
iOS 11 မှာလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ သင်၏ iPhone တွင်ဤရွေးချယ်မှုအသစ်ကိုမည်သို့အဆင့်ဆင့်ပြုပြင်ရမည်ကိုသင့်အားတစ်ဆင့်ချင်းပြသပါမည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှ App Store ၏ဝယ်ယူမှုသမိုင်းကိုမည်သို့ကြည့်မည်နည်း
iOS 11 မှပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များအနက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူမှုသမိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone မှကျွန်ုပ်တို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်
လက်ရှိသင်ခန်းစာများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ ယနေ့တွင်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ iPhone X ကိုပိတ်ထားရန်၊ ပြန်လည်စတင်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ဖွင့်ရန်မည်သည့်လမ်းကြောင်းများကိုပြမည်နည်း။
iPhone X ရောက်လာပြီး iOS ဂေဟစနစ်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးလုပ်ဆောင်မှုအချို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ပြီးတော့သူတို့ထဲကတစ်ခုကအက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းများအကြား iPhone X ပေါ်သို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနည်း
iPhone X နှင့်အက်ပ်များအကြားမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း။ အမှန်တရားကတော့အက်ပဲလ်ဟာစနစ်သစ်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းအကောင်အထည်ဖော်ရမယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါ။
iPhone X ရဲ့အမှန်တကယ်ဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်းကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ
iPhone X ရဲ့အထင်ရှားဆုံးအချက်ကတော့အောက်ခြေရှိ Home ခလုတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင် ...
Apple Pay နှင့် iPhone X တွင် Face ID အသုံးပြုနည်း
သင်ကသူတို့ဝယ်ယူမှုတွင် Apple Pay ကိုသုံးပြီး iPhone X ၏ Face ID ဖြင့်အသုံးပြုလိုသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပါသလား။ ဤနေရာတွင်၎င်းကိုမည်သို့ configure နှင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုဖော်ပြပါမည်
iPhone X တွင်ဖန်သားပြင်များမည်သို့ရိုက်ရမည်နည်း
သင်၏ Apple အကောင့်ကို iCloud.com သို့ပြောင်းလဲနည်း
နောက်ဆုံးတော့ Apple ကသင့်ရဲ့ iCloud.com အကောင့်ကို Apple ID နဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ပုံနှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။
လက်ခံသူကဖတ်လို့မရအောင် WhatsApp စာတိုတွေကိုဘယ်လိုဖျက်ရမလဲ
နောက်ဆုံးသတင်းများအပြီးတွင်အကျော်ကြားဆုံးစာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သော WhatsApp သည်နောက်ဆုံးတွင်သင့်အားစာတိုများကိုအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်ခွင့်ပြုသည်
WhatsApp က iPhone ကနေပေးပို့လိုက်တဲ့စာတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ
iPhone ၏ True Tone ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပိတ်နိုင်သနည်း။
iPhone မျက်နှာပြင်၏ True Tone ကိုရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့်မည်သို့ပိတ်ဆို့နိုင်ကြောင်းသင်သိစေချင်သည်။ သင်ခန်းစာနှင့်အတူသွားကြစို့။
သင်၏ WhatsApp စကားပြောဆိုမှုများကိုသင်၏ iPhone အသစ်သို့ရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်မှမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်ကိုသင်ပေးပါမည်။
iOS ဗားရှင်းအသစ်ရောက်ရှိလာသည့်အခါ၎င်းသည်သတင်းများရောက်ရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ပြproblemsနာများလည်းရှိသည်။ သင်၏ iPhone ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရသည်။
AirPlay မှာ iOS 11 ကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာကိုသင်သိချင်တယ်၊ သင်အတွက်ငါတို့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာမင်းကိုသင်ပေးတယ်။
PC ကိုသွားစရာမလိုဘဲ GIF ကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးမယ်။
WhatsApp စကားပြောဆိုမှုများကိုသင်ပြန်လည်ရယူလိုပါသလား။ chats အဟောင်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်တစ်ဆင့်ချင်းမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်
သင့်ရဲ့ iPhone မှာ Telegram နဲ့အခမဲ့သီချင်းတွေကိုဘယ်လိုနားထောင်မလဲ
ရှုပ်ထွေးမှုများစွာနှင့်လုံးဝအခမဲ့မပါဘဲသင် Telegram မှတစ်ဆင့်သင်နှစ်သက်သောဂီတကိုမည်သို့ခံစားနိုင်မည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှနှင့် iTunes မှ Freemium ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအက်ပလီကေးရှင်းများသို့အဆိုပါစာရင်းသွင်းခြင်းများကိုပယ်ဖျက်ရန်သင်ခန်းစာသေးသေးလေးကိုပြသသည်။
iOS 11 တွင်ရရှိနိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုအသစ်ကြောင့်စနစ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်ရန်ဂရုစိုက်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့အပိုနေရာရရှိနိုင်သည်။
iOS 11 မှစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကြောင့်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်စရာမလိုဘဲ iOS Settings မှတဆင့် iPhone နှင့် iPad နှစ်ခုလုံးကိုပိတ်နိုင်သည်။
Zip ဖိုင်များကို iOS 11 နှင့် Zipped ဖြင့် compress and decompress လုပ်ပါ
iOS 11 ဖြင့်ဖိုင်များကို compress လုပ်ခြင်းနှင့် decompress လုပ်ခြင်းသည် Zipped application နှင့်ဇာတိ Files အက်ပလီကေးရှင်းများကြောင့်အလွန်လွယ်ကူမြန်ဆန်လာသည်။
iCloud သိုလှောင်မှုကို iOS 11 ဖြင့်မိသားစုမျှဝေခြင်း
iOS11 မှတစ်ဆင့်သင်၏မိသားစုအုပ်စုနှင့်သင်၏ iCloud သိုလှောင်မှုကိုအလွယ်တကူမည်သို့လွယ်ကူစွာမျှဝေမည်ကိုပြသပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ၏ဘက်ထရီအခြေအနေနှင့်စစ်ဆေးပြီးစီးရန်အားဖြည့်မှုသံသရာကိုစစ်ဆေးရန်အခြားနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုပြသပါသည်။
iOS 8 ဖြင့် iPhone 11 သစ်၏ True Tone function ကိုမည်သို့သက်ဝင်ရမည်နည်း
iPhone 8 ဖန်သားပြင်၏ True Tone သစ်ကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းလမ်းများမှချိန်ညှိထားသောအက်ပ်နှင့် iOS 11 ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
iPhone 8 မှာ Force restart လုပ်ရတာပိုရှုပ်ထွေးလာတယ်
iPhone 8 ကို restart လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ iPhone 8 ကိုသော့ခတ်ထားလျှင် restart လုပ်ရန်သင်နှိပ်ရမည့်ခလုပ်အသစ်များရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
iOS 11 Messages အတွက် application switcher ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြုပြင်နိုင်ဖို့ရိုးရိုးအဆင့်အနည်းငယ်နဲ့သင်တို့ iPhone update ကိုပို့ပေးပါမည်။
SOS နာရီမျက်နှာပြင်ဆက်တင်များသည် watchOS4အတွက်ဘယ်နေရာနှင့်၎င်းတို့ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသင်အလွယ်တကူစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်ကိုသင့်အားပြသပါမည်။
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူ iTunes 12.7 ကနေ iTunes XNUMX ကနေ USB cable မှတစ်ဆင့်ဖုန်းမြည်သံများကိုမည်သို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်သွားမှာပါ။
iOS 11 ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Live Photos ကို Third-party application များမပါပဲလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်
iOS 11 မှာ Touch ID နဲ့ Face ID ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
Touch ID နှင့် Face ID တို့ကိုသင် disable လုပ်နိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ Actualidad အိုင်ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်မည်သို့သင်ရမည်ကိုသင်ပေးမည်။
ဒါက watchOS4နှလုံးမော်နီတာအသစ်အလုပ်လုပ်ပုံပါ
watchOS4သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေမည့်နှလုံးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအသစ်ကိုထည့်သွင်းထားသည်
iOS 11 GM သို့ရောက်သောအခါသံသယများပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် iOS 11 GM မှတရားဝင်ဗားရှင်းသို့မည်သို့သွားနိုင်မည်နည်း။ သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသင့်အားပြသသည်။
iOS 11 App Store အသစ်တွင်ဗွီဒီယိုများ autoplay ကို disable လုပ်နည်း
ဒီဆောင်းပါးမှာ iOS 11 App Store မှာဗီဒီယိုတွေကိုအလိုအလျောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်။
iOS 11 ဖြင့် iPhone ဘက်ထရီ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်နိုင်မည့်သင့်လျော်သောအကြံဥာဏ်များကိုသင့်အားပေးသွားပါမည်။
iOS 11 မှာ Apple က WiFi နဲ့ Bluetooth ခလုတ်တွေရဲ့အပြုအမူကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီ။ အခုသူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပုံကိုရှင်းပြပါ့မယ်
iOS 11 သို့မွမ်းမံခြင်းမပြုမီသင်သည်သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင်အလုပ်များကိုဆက်လုပ်ရမည်။ ၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ၊ iOS 11 ၏သတင်းကိုအန္တရာယ်မကင်းဘဲခံစားပါ။
ပျောက်သော AirDrop Control Center ကို iOS 11 ဖြင့်အသက်သွင်းခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်။
iOS 11 သည်အချက်အလက်နှင့်ဘက်ထရီကိုသိမ်းဆည်းရန်မြန်ဆန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်
Apple က iOS 11 ကိုမိုဘိုင်းဒေတာပေါ်မှာတတ်နိုင်သလောက်စုဆောင်းနိုင်အောင်ဘက်ထရီစွမ်းအင်စုဆောင်းမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကိုစဉ်းစားပြီး iOS XNUMX ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
iOS 11 သည်ကျွန်ုပ်တို့စက်ပစ္စည်းများအတွင်းနေရာလွတ်ချပေးလိမ့်မည်။ စနစ်ထဲသို့ပေါင်းစပ်ထားသောရွေးစရာအသစ်များကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးလိမ့်မည်
iOS 11 App Store တွင် AutoPlay ကို disable လုပ်နည်း
iOS 11 App Store တွင် AutoPlay ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတာကြည့်ပြီး Apps အကြောင်းသိကောင်းစရာဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနိုင်မည်။
iOS 11 ရှိ iPhone's Portrait Mode နှင့်အတူဓာတ်ပုံတွင် blur ဖယ်ရှားခြင်း
iPhone7Plus တွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ Portrait Mode ဖြစ်သည်။ ဒီ mode နဲ့အသုံးပြုသူ ...
WhatsApp ကနေဗီဒီယိုအရှည်ကြီးကိုဘယ်လိုပို့မလဲ။ WhatsApp ကခွင့်ပြုထားတာထက်ဗီဒီယိုပိုရှည်တဲ့နည်းလမ်းကိုမင်းတို့ပြပေးတယ်။
သင့် iPhone နှင့် iPad တို့တွင်ပိုမိုလွတ်လပ်သောမှတ်ဉာဏ်ပိုမိုရရှိစေရန်ကူညီပေးပါမည်။ သူတို့အားလုံးကြိုးစားခဲ့ပြီလား
iTunes မပါပဲသီချင်းသို့ iTunes မပါဘဲမည်သို့ပြောင်းမည်နည်း
iTunes ကိုမသုံးပဲတေးဂီတကိုသင့် iPhone သို့ဘယ်လိုလွှဲပြောင်းရမယ်ဆိုတာကိုသင်ကြားပေးမှာပါ။ သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကို Apple မိုဘိုင်းမှာနေရာချထားဖို့ပါ။
iCloud Photo Library အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားခြင်း
မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုရှိမှသာ iOS နှင့် Mac ရှိ iCloud Photo Library သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်
iPhone အတွက်ဖုန်းမြည်သံများကိုအခမဲ့ download လုပ်ရန် (သို့) သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းများမှသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂီတများကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမယ်။
အားလုံး iOS 11 Control Center အသစ်အကြောင်း
iPhone နှင့် iPad အတွက် iOS 11 ၏အသစ်အဆန်းများဖြစ်သော Control Center အသစ်ကိုစိတ် ၀ င်စားပါသည်
သီချင်းတွေကိုဘယ်လိုပို့မလဲ (သို့) လက်ခံရရှိသူတွေကို WhatsApp ကနေသိမ်းဆည်းမလဲ
WhatsApp မှရရှိသောသီချင်းများကိုသင်ပို့ချင်ပါသလားသို့မဟုတ်သိမ်းလိုပါသလား။ iPhone တွင် WhatsApp အသံများကိုဘယ်မှာသိမ်းထားသနည်း။ ကောင်းပြီဝင်အပေါင်းတို့နှင့်ထွက်ရှာ!
iPhone ကို DFU Mode တွင်ထည့်ပါ
iPhone ကို DFU mode သို့မည်သို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းရမည်ကိုလေ့လာရန် (သို့) သင့် iPhone ကိုသော့ခတ်ထားပြီးပန်းသီး၏မျက်နှာပြင်ထက်မကျော်လွန်သွားပါကလေ့လာပါ။
iPhone ကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်နှင့် iTunes ဖြင့်သို့မဟုတ် iTunes မပါဘဲ format လုပ်ရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုပြောပြပါမည်။
iPhone မှာ Facebook ဗီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
Facebook ဗွီဒီယိုများကို iPhone တွင်မည်ကဲ့သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်နှင့်ဗွီဒီယိုများရရန်သင်သုံးမည့်အပလီကေးရှင်းကိုရှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင့်ကို Facebook ဗီဒီယိုများကူးယူခြင်းမှတားဆီးမထားပါစေနဲ့
ဤရွေ့ကားသင့်ရဲ့ iPhone ကိုသူ့ဟာသူပိတ်ထားခြင်းနှင့်သင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မယူမီသင်ကြိုးစားသင့်ကြောင်းလျှင်လိုက်နာရန်အဆင့်များဖြစ်ကြသည် အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းရုတ်တရက်ပိတ်ထားသလဲ?
Application တွေကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ၊ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှာနေရာလွတ်ဘယ်လိုချရမလဲ
အကယ်၍ သင်၏ iPhone နှင့် iPasd တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနေရာကိုသိမ်းဆည်းလိုပါက၊ သင်အသုံးမပြုတော့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုဖျက်ရန်နည်းလမ်းများစွာအကြောင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် Apple Music ဖွင့်ရန်စာရင်းများကိုမည်သို့ကြည့်ရှု။ မျှဝေမည်နည်း
iOS 11 (ယခုအများဆိုင် beta ဗားရှင်းတွင်လည်းရရှိနိုင်) နှင့်အတူအက်ပလီကေးရှင်းဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုသည် ...
iOS 11 ၏အများသုံး Beta ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိပြီးနောက် iOS 11 Public Beta ကိုသင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
Developer account မရှိပဲ iOS2beta 11 ကိုမည်သို့အခမဲ့ install လုပ်ရမည်နည်း
အကယ်၍ သင်သည် iOS 11 beta2သတင်းကိုကြိုးစားရန်ကြိုးစားနေသည်ဆိုပါက၊ ၎င်းကိုသင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ပေါ်တွင်မည်သည့်တီထွင်ဖန်တီးသူမှမသုံးဘဲအခမဲ့ထည့်သွင်းမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုဘယ်လိုလှည့်ရမလဲ။ သင်လွဲချော်နေသောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad မှ၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
PlayStation4ကို iPad ပေါ်တွင်ကစားနည်း R-Play ကျေးဇူးတင်ပါသည်
iPhone News သင်ခန်းစာများတွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ PlayStation4ကို iPad ပေါ်တွင်ကစားနိုင်ပုံကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောပြသွားမည်။
iOS 11 ရှိ Notes application ၏လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကြောင့် third-party applications များမသုံးပဲ document များကိုတိုက်ရိုက် scan နိုင်သည်။
iOS 11 သည်သင်၏ AirPods တွင်ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့သည် iOS 10 တွင်အလုပ်လုပ်သည်
iOS 11 သည်နားကြပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် AirPods သို့ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် iOS 10 နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
iOS 11 ကို အသုံးပြု၍ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအလိုအလျောက်ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်
တဖြည်းဖြည်းချင်းနည်းနည်းပါးပါးနှင့် developer များက iOS 11 ၏အားသာချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ် Actualidad iPhone မှသင့်ကိုအကြောင်းကြားနေပါသည်။
သင့်ရဲ့ iPhone မျက်နှာပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်
မင်းရဲ့ iPhone မျက်နှာပြင်ကိုဘယ်လိုသိမ်းရမလဲသိလား။ ၎င်းကိုရရှိရန်နည်းလမ်းများအားလုံးကိုရှင်းပြသည်။ WiFi၊ ကြိုးများ၊ Windows၊ Mac၊ iOS 11 မှ…
iCloud Keychain ကို iPhone တွင်အသုံးပြုခြင်း
iCloud Keychain ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်၊ ၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ မည်သည့်ဒေတာသိုလှောင်သည်နှင့်၎င်းမှအများဆုံးရယူရန်သင်လိုအပ်သည်။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်တွေနဲ့သင့် iPhone စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
စနေနေ့မင်္ဂလာရှိ၏။ အိုင်အိုအက်စ်၏လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သော iOS သည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအလွန်အကျွံနှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးစေသည့်စနစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။
အဆက်အသွယ်များကို iPhone သို့တင်သွင်းနည်း
Gmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Windows, iTunes နှင့်အခြားအရာများမှ iPhone သို့အဆက်အသွယ်များကိုမည်သို့တင်သွင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါသည်။ သင်၏ပြက္ခဒိန်ကိုအိုင်ဖုန်းသို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောင်းပါ
Apple Watch နှင့်အတူသီချင်းဘယ်လိုနားထောင်ရမလဲ
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်တေးဂီတကိုသင်မည်သို့နားဆင်နိုင်မည်၊ ဂီတကို Apple Watch သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်နားကြပ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုရှင်းပြပါမည်
jailbreak မပါပဲ iOS တွင်ဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ချဲ့မည်နည်း
အဆက်အသွယ်များကို iPhone မှတင်ပို့နည်း
သင်၏ iPhone မှအခြားဝန်ဆောင်မှုများ (gmail, iCloud ... ) နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ (Android, Windows, Mac) သို့မည်သို့တင်ပို့ရမည်ကိုရှင်းပြထားသည်။
Wish List သည် iOS ပေါ်တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း
iPhone ပေါ်ရှိ Spotlight Search History ကိုဘယ်လိုရှင်းလင်းမလဲ
ရှာဖွေခြင်းသမိုင်းကိုပိတ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ iPhone တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောရှာဖွေမှုများကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
ဒီလှည့်ကွက်ဟောင်းနဲ့မင်းရဲ့ iPhone ကိုနေရာလွတ်မြန်အောင်လုပ်ပါ
အကယ်၍ iOS တွင်အချိန်အတော်ကြာတည်ရှိပြီးသင်နေရာချွေတာနိုင်သည့်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်လှည့်ကွက်ကိုစဉ်းစားပါကဤအရာအားလုံးကိုကျန်ပစ်နိုင်သည်။
သင့် iPhone နှိုးစက်၏ "အိပ်ပျော်ခြင်း" function ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
အခုအရေးကြီးတဲ့အချက်က iOS ရဲ့ "Sleep" function ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပါပဲ။
Safari တွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏စကားဝှက်များကိုကြည့်ရှုတည်းဖြတ်ခြင်း
Safari တွင်သိမ်းထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်စကားဝှက်များကိုကြည့်ရှုတည်းဖြတ်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ်။
သင့်သူငယ်ချင်းများ၏မျက်နှာများကိုသိရှိနိုင်ရန်သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုမည်သို့သင်ရမည်နည်း
iPhone News မှသင့်အား iPhone သို့မဟုတ် iPad သင်ကြားပို့ချပေးလိုသည်မှာ၎င်းတို့ထဲမှမည်သူပေါ် မူတည်၍ ဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့စာရင်းပြုစုရမည်ကိုသင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
အိုင်ပက်နဲ့အိုင်ပက်ဒ် in-app အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
သင့် iPhone၊ iPad ရှိ in-app ratings စွမ်းရည်ကိုမည်သို့ပိတ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြတော့မည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အသံစာကိုအလွယ်တကူမည်သို့ပိတ်နိုင်သည်ကိုရှာဖွေပါ။ Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, MásMóvil, Lowi, Pepephone နှင့်အခြားအရာများ။
သင်၏ Apple Watch အမည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Apple Watch ကဖုန်းကိုအမြဲတမ်းမထားရန်လိုသည်။ သင်အလိုရှိသည်အတိုင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြသမည်ကိုပြပါလိမ့်မည်။
AirDrop ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ၊ iOS နဲ့ macOS ကြားမှာဖိုင်တွေကိုဘယ်လိုဝေမျှရမယ်ဆိုတာကိုငါတို့ပြောတယ်။ စနစ်၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်သိပါသလား။
iPhone ports တွေကိုဘာကြောင့်သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတာလဲ
ပျော်စရာကောင်းတဲ့၊ အံ့သြစရာကောင်းသောဗီဒီယိုများပြုလုပ်ရန်အတွက် Apple ကလစ်များကိုအသုံးပြုခြင်း
ကျွန်ုပ်၏ iPhone မှဓါတ်ပုံများကိုပိုမိုချဲ့နည်း
သင်၏ iCloud အကောင့်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ဟက်ကာများမှကာကွယ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့ iCloud ဒေတာကိုတစ်စုံတစ် ဦး က ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်အဓိကလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုရှင်းပြသည်
YouTube တွင် Safari သို့မဟုတ် WhatsApp မှဗီဒီယိုတစ်ခုကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် YouTube တွင် Safari သို့မဟုတ် WhatsApp မှဗီဒီယိုတစ်ခုကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြချင်သည်။ သို့မှသာ ၄ င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးအားရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Apple Watch နဲ့ဘက်ထရီကိုဘယ်လိုချွေတာမလဲ
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးနောက်ပြန်လည်သိုလှောင်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းကိုအသစ်သို့လွှဲပြောင်းရန်အတွက် Apple Watch တွင်အချက်အလက်အားလုံးကိုမည်သို့သိမ်းဆည်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်
WhatsApp ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။ ဒီ function ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ
WhatsApp အခြေအနေ၊ အသစ်နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုတည်းခို။ ပျော်မွေ့ပါ။
သင့်ရဲ့ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှစာရွက်စာတမ်းများကိုပုံနှိပ်နည်း
iOS 10 နှင့် AirPrint tool တို့ဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများကို iPhone နှင့် iPad မှတဆင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးမပါသောပုံနှိပ်နိုင်သည်။
WhatsApp ++ ကို iOS 10 တွင် Jailbreak မပါ ၀ င်ပါ
Jailbreak မပါပဲအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို WhatsApp ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းကို WhatsApp ++ ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်ချိန်ညှိချက်များထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
third-party apps များမပါဘဲ iOS တွင်စကားလုံးများကိုဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နည်း
သင်၏ iPhone မှစကားလုံးများကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလိုပါသလား (သို့) တတိယပါတီအက်ပ်များကိုအသုံးမပြုလိုပါသလော။ ဒါကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒီ post မှာဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ။
ဒဏ္myာရီအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ - ဒီကွန်ပျူတာကိုယုံပါ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤမေးခွန်းကိုမြင်ပြီဒီကွန်ပျူတာကိုယုံ? ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသည်၊ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းပြသည်
လောလောဆယ် iDevice (သို့) Mac မျက်နှာပြင်ကိုအခြားအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်မျှဝေရန်ကိရိယာများနှင့်ဇာတိအပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။
WatchOS3တွင် Apple Watch အက်ပလီကေးရှင်းများကိုမည်သို့နီးကပ်စွာပိတ်ခိုင်းမည်နည်း
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုနှင့်ပြwithနာကြုံနေရသလား။ ဒီ post မှာတော့ watchOS3မှာ application တွေကိုဘယ်လိုအတင်းဖိအားပေးမလဲဆိုတာသင်ပေးလိမ့်မယ်။
Apple Watch သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုမည်သို့အရည်အချင်းပြည့်မှီကြောင်းနှင့်၎င်းအပေါ်ထားရှိသောနေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်များက၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ရန်ရှင်းပြသည်။
သင့် iPhone 6s ၏ညံ့ဖျင်းသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း
iPhone News တွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ iPhone 6s ၏အလွန်နည်းပါးသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးမြှင့်ရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်များအနည်းငယ်ပေးပါမည်။
WiFi ကို ကျေးဇူးတင်၍ သင့် Apple Watch နှင့် iPhone နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးတက်စေပါ
Apple Watch ၏အိုင်ဖုန်းနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်မှုရှိကြောင်းနှင့်နာရီအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း 5GHz ကွန်ယက်များကိုမည်သို့တိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။
Safari တွင် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကို iOS အတွက်ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမလဲ
Safari နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသည်အခမဲ့ Microsoft Translator application အတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်။
Yalu, iOS 10.2 Jailbreak, ယခုရရှိနိုင်
Yalu 102 သည် Cydia ကို iOS 10.2 တွင် support လုပ်ထားသော devices များ၌ install လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်
iOS 10.2 တွင် iOS9emoji ကိုမည်သို့ခံစားရမည်နည်း။
iOS 10.2 ဗားရှင်းတွင်ရှိနေခြင်းအတွက် iOS9emoji ကိုသင်လွတ်သွားပါသလား။ ဒီဆောင်းပါးမှာသင့်ကို jailbreak လုပ်ရင်ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာပြပါတယ်။
သင့် iPhone မှလူများနှင့်ဓါတ်ပုံများကိုမျှဝေနည်း
မတူညီသော cloud သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများကကျွန်ုပ်တို့အားအခြားလူများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ iPhone သည်အီးမေးလ်များကိုမပို့ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ဤစာမူတွင်စာပို့လျှောက်လွှာတွင်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြသပါမည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone သည် "မှားသော SIM" မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြသည်။ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
သင့် iPhone မျက်နှာပြင်တွင် "မှားနေသော SIM" မက်ဆေ့ခ်ျကိုတွေ့ပြီလား။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒီ post မှာတော့မင်းသိထားသင့်သမျှကိုပြောပြပါမယ်။
အကယ်၍ သင်၏ iPhone သည် ၀ န်ဆောင်မှုမဲ့ကြောင်းအသိပေးစာကိုပြခြင်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းမှုလျော့သွားပြီးအချက်ပြမှုပျောက်သွားပါကသင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသင့်အားပြသပါမည်။ မင်းရဲ့ iPhone ဘာဖြစ်သွားသလဲ
သင်၏ Bluetooth နားကြပ်ကို Apple Watch နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း
သင်၏ Bluetooth နားကြပ်ကို Apple Watch နှင့်တွဲဖက်လိုသလား။ ဒီ post မှာတော့မင်းတို့သိထားသင့်တဲ့အရာတွေကိုရှင်းပြထားတယ်။
ငါဖုန်းခေါ်သောအခါအဘယ်ကြောင့်ငါ့ iPhone မျက်နှာပြင်ကိုပိတ်ထားသနည်း
ငါဖုန်းခေါ်သောအခါ iPhone မျက်နှာပြင်ပိတ်သွားသည်။ ပုံမှန်လား? ဒီ post မှာသင်သိထားသင့်တာအားလုံးကိုရှင်းပြပါမယ်။
AirPods နှင့် Beats Solo3အသံပြproblemsနာများကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်
သင် AirPods နှင့်အတူအသံပြproblemsနာများရှိပါသလား ကျွန်ုပ်တို့သည် AirPods များ၏အသံချို့ယွင်းချက်များကိုပြုပြင်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါသည်။
iPhone တစ်ခုမှခေါ်ဆိုမှုများသည်နောက်တစ်ခုကိုဖုန်းဆက်သည်။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ?
iPhone တစ်ခုမှဖုန်းသည်အခြား iPhone ပေါ်တွင်တစ်ချိန်တည်းဖုန်းမြည်နေပါသလား။ ဤစာမူ၌ကျွန်ုပ်တို့ပေးသည့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုစမ်းကြည့်ပါ။
iOS 10 Photos app တွင် Dialing feature ကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း
iOS 10 မှကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ယခုပို့စ်တွင်ဓာတ်ပုံအက်ပ်မှမည်ကဲ့သို့ခေါ်ဆိုနိုင်သည်ကိုရှင်းပြထားသည်။
Instagram Stories တွင် Live Photos ကိုမျှဝေနည်း
Live Photos များကို Instagram Stories တွင်မည်သို့ဝေမျှရမည်ကိုသင့်အားပြသပါမည်။
ကုန်သည်တစ် ဦး သည် Apple Pay နှင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံခြင်းရှိမရှိမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း
သင့်တွင် Apple Pay နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကဒ်ရှိပါသလား။ သို့သော်၎င်းကိုတိကျတဲ့စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာသုံးလို့ရမလားမသိဘူးလား။ ဒီ post မှာတော့မင်းကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာပြတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား AirPods box ၏ဘက်ထရီပြproblemနာအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးပါမည်
သင့်အား AirPods အမှုမှဘက်ထရီယိုစီးမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဖြေရှင်းနည်းကိုသင်ပြသပါမည်။
မင်း iPhone ပျောက်သွားပြီလား သင်၏ပျောက်သော iPhone ကိုသော့ခတ်ရန်သို့မဟုတ်ရှာရန်လမ်းညွှန်
သင်၏ Apple ID အတွက်အချက်နှစ်ချက်စစ်မှန်ကြောင်းကိုမည်သို့ disable လုပ်နည်း
ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ Apple ID မှာ Two-factor authentication ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးသွားမှာပါ။
သင်၏ Apple Watch နှင့် AirPods နှင့်သင်လုပ်နိုင်သည့်အရာငါးခု
Apple Watch သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ AirPods များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Apple နာရီနှင့်နားကြပ်များနှင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာငါးခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်
ဂိမ်းကိုမဖျက်ပဲ Super Mario Run အချက်အလက်များကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်း iPhone News တွင်သင်၏ Super Mario Run အချက်အလက်များကိုဂိမ်းမဖျက်ဘဲသင်မည်သို့ဖျက်ရမည်ကိုသင်ပေးမည်။
Jalbreak iOS 10 ကို Yalu နှင့် Cydia Impactor တို့အတွက်သင်ခန်းစာ
ဒီသင်ခန်းစာမှာ ial 10 ကို yalu jailbreak နှင့် Cydia Impactor နှင့် jailbreak လုပ်ဖို့သင်သိထားသင့်တာတွေကိုပြောပြပါမယ်။
ဒီနေ့မင်းတို့ကို YouTube ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သင်အကောင်းဆုံး applications များယူဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်၎င်းကိုသင့် iPhone နှင့်အခြားပစ္စည်းများတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော jailbreak အတွက် iOS 10.2 မှ iOS 10.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
iOS 10.1.1 အတွက်မကြာမီ jailbreak ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေသဖြင့်အဆင့်နိမ့်ကျသွားသည်။ ဘယ်လိုရှင်းပြရတယ်။
Luigi, Toad, Yoshi နဲ့ Toadette တို့ကို Super Mario Run မှာဘယ်လိုရမလည်း
စူပါမာရီယို Run တွင်ဇာတ်ကောင်မည်မျှရနိုင်မည်နည်း၊ Yoshi, Toad နှင့် Princess Peach အကြောင်းပြောဆိုခြင်း။
iOS 10.2 ရှိ Music စနစ်တွင်ကြယ်ပွင့်စနစ်ကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း
Music app အတွက်ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် iOS 10.2 နှင့်အတူပြန်လာသည်။ ဒီ post မှာတော့ဒီ system ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာပြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone မှအချက်အလက်များကို Android စမတ်ဖုန်းသို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကအက်ပဲလ်က Google Drive တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်မှလွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
မတော်တဆဖွင့်မိလျှင် VoiceOver ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
သင့် iPhone ကမလုပ်သင့်သည့်အချိန်တွင်သင့်အားစကားပြောပါသလား။ မင်းရဲ့ iPhone ကတုန့်ပြန်မှုမရှိဘူးလား။ မျက်နှာပြင်ကလျှောမကျဘူးလား။ VoiceOver ကိုသင်ဖွင့်ထားလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုရှင်းပြသည်။
Candy Crush ကို load မလုပ်သည့်အချိန်အတွက်သိကောင်းစရာများနှင့်အချက်များ
သကြားလုံး Crush load မထားဘူး! ကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးလား။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ? ဒီဆောင်းပါးမှာနာမည်ကြီးဂိမ်းကမဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသင့်အတွက်အကြံဥာဏ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Netflix ရဲ့ content ကိုအော့ဖ်လိုင်းမှာဘယ်လို download လုပ်ရမလဲ
NEtlifx သည်အကြောင်းအရာများကိုအော့ဖ်လိုင်းတွင်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပြီးသင်မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့အားသင့်စရာများမရပါ။
သင့်အိုင်ဖုန်း၊ Apple Watch နှင့် Mac တို့နှင့်အတူစပိန်နိုင်ငံရှိ Apple Pay ကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း
Apple Pay သည်စပိန်တွင်ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်၍ ၎င်းကိုမည်သို့ configure နှင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြခဲ့သည်
iCloud Calendar မှ spam များကိုဖယ်ရှားခြင်း
iam အသုံးပြုသူများစွာ၏ပြက္ခဒိန်များက spam အသစ်တစ်ခုသည်မသိသောပေးပို့သူများထံမှမလိုလားအပ်သောဖိတ်ကြားမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သင့်အားအဖြေနှစ်ခုပေးသည်။
Jailbreak မပါပဲသင့်ရဲ့ iPhone မှာနေရာလွတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Jailbreak သို့မဟုတ်အခြားပရိုဂရမ်အမျိုးအစားများမလိုအပ်ဘဲသင်၏ iPhone ပေါ်ရှိနေရာလွတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလွှတ်ပေးရန်ဒီနေ့၏အကြံဥာဏ်ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
iOS 10.x တွင် springboard မှ app အမည်များကို jailbreak မပါပဲဖယ်ရှားခြင်း
iOS 10.x ထဲက application နာမည်ကို jailbreak မလိုဘဲဖယ်ရှားပေးမယ့်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်။
Apple Watch နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတိုးမြှင့်နည်း
သင်၏ Apple Watch မှနှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းတာခြင်းသည်စိတ်မချရဟုသင်ထင်ပါသလား။ ဤတွင်သင့်အားပိုမိုမှန်ကန်သောရလဒ်များကိုပေးရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်များစွာပေးသည်။
Do Not Disturb mode သို့အရေးပေါ်ခြွင်းချက်တစ်ခုထည့်ရန်
အနှောင့်အယှက်မပေးသော mode သည်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းဖုန်းမြည်လိုပါကမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးပေါ်ခြွင်းချက်တစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။
အရေးကြီးသော WhatsApp update ကို - လူတိုင်းအတွက်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုရရှိနိုင်ပါသည်
WhatsApp ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုသင်ကြိုးစားလိုပါသလား။ ကောင်းပြီ, App Store သို့ပြေးနှင့်မွမ်းမံ! သူတို့ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ
WhatsApp Two-Step Verification အလုပ်လုပ်ပုံ
WhatsApp သည်အဆင့်နှစ်ဆင့်အတည်ပြုသည့်စနစ်ကိုစမ်းသပ်နေပြီး၎င်းသည်၎င်း၏စာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှု၏လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ဝေးသည်
Actualidad iPhone မှာပြသမှုအရဘက်ထရီရှိနေတုန်း iPhone ကိုပိတ်ထားစေတဲ့အမှားကိုဖြေရှင်းဖို့သင်ပေးတယ်။
WhatsApp တွင်မျှဝေရန်အကောင်းဆုံး GIF များကိုဘယ်မှာရှာရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့တွင် GIF ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မရှိသောကြောင့်ဤအကြောင်းအရာများကို WhatsApp တွင်မျှဝေရန်အကောင်းဆုံး GIF များကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြတော့မည်။
ပယ်ဖျက်ထားသောအချက်အလက်များကို iCloud မှမည်သို့ဆယ်တင်မည်နည်း
iCloud သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း iCloud မှမည်သည့်အဆက်အသွယ်၊ ပြက္ခဒိန်၊ အကြိုက်ဆုံးသို့မဟုတ်ဖိုင်မဆိုပြန်လည်ရယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်။
ဤသင်ခန်းစာဖြင့်သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုအစဉ်အမြဲဖျက်ပါ
အခက်အခဲကအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ Facebook သုံးစွဲသူအားအပြီးတိုင်မည်သို့ဖျက်ပစ်မည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းသင်ပြသွားမည်။
Dock ကို watchOS 3.x တွင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်၊
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုအသုံးပြုသလား။ ဒီလိုဖြစ်ရင် watchOS 3.x မှာ Dock ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်၊ ဘယ်လိုစိတ်ကြိုက်လုပ်မလဲဆိုတာလေ့လာသင့်ပါတယ်။
iOS 10 မှာမက်ဆေ့ခ်ျအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုပြန်ဆပ်ရမလဲ
iOS 10, 10.1 ၏ပထမဆုံးအဓိက update နှင့်အတူ Apple သည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော (သို့) ပေးပို့သောမက်ဆေ့ခ်ျများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြန်လည်ဖော်ပြခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
သင့် iPhone ပေါ်တွင် jailbreak မပါဘဲအနက်ရောင်နောက်ခံရှိ Dock နှင့် folders
ဒီနေ့မှာတော့သင့်ကို iOS 10 ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ iPhone တွင် jailbreak မလိုဘဲအမှောင်မိုက်ဖုံးထားသည့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရသည်
သင်၏ Vine ဗီဒီယိုများကို iOS နှင့် macOS တို့တွင်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးဖြင့် download လုပ်ရန်နည်းလမ်းအချို့ကိုသင်ပြပါမည်။
စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်တရားဝင်မဟုတ်သော်လည်း Apple Watch တွင် Scribble အသုံးပြုနည်း
watchOS3တွင်လက်ချောင်းဖြင့်ရေးသားရန်ခွင့်ပြုသည့် Scribble ဟုခေါ်သောရွေးစရာအသစ်တစ်ခုပါရှိသည်။ ဒီမှာဒီမှာစပိန်လိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတယ်။